Leicester City oo garaacday kooxda Chelsea kuna guuleysatay koobkeedii ugu horreeyay ee tartanka FA Cup-ka… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye May 15, 2021
(London) 15 Maajo 2021. Leicester City ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay koobkeedii ugu horreeyay ee tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay kaga adkaatay kooxda Chelsea 0-1, ciyaar xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Wembley.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Chelsea iyo Leicester City ku kala nasteen bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 63-aad kooxda Leicester City ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay xiddigooda Youri Tielemans.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-1ay kaga adkaatay Leicester City kooxda Chelsea oo ay kulan finalka ahaa ay ku wada ciyaareen garoonka Wembley. Leicester ayaana ku guuleysatay koobkeedii ugu horreeyay ee tartanka FA Cup-ka